China Cat Eye Rivet Retro muraayadaha Dumarka 5069 warshad iyo alaab-qeybiye | Yinfeng
Muraayado unisex tortoiseshell shakhsi ah ayaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo midabyo moodada ah. Naqshadeynta silsiladda birta ah ee birta ah ee isku xirka muraayadda muraayadda iyo macbadyada waa mid dheer oo waara.
Shayga No. 5069
Midabada 11 midab
Muraayadaha indhaha ee indhaha ayaa ah isbeddel moodada ah oo aan la joojin karin sanadkan. Qaabka isha bisadu waxay leedahay dhadhamin dib-u-dhac ah, cidhifyada yar ee kor loo qaadayna waxay la mid yihiin bisadaha leh xoogaa duur-joog ah iyo isla weyni. Midabada muraayadaha muraayadaha ee si joogta ah loo soo bandhigo waxay noqonayaan kuwo aad u adag, laakiin taxanaha madow-madow ayaa weli ku jira classic of all-kulan. Cawlan khafiifka ah wuxuu leeyahay dherjin hoose marka loo eego madowga saafiga ah mana u ekaan doono caajis. Qorraxdu way iftiimaysaa, iyada oo la socota, ma xannibi karto oo kaliya shucaaca ultraviolet, laakiin sidoo kale waxay ku dari kartaa qaab quruxsan dharka guud.
Cat Eye Rivet Retro Women 2021 muraayadaha qorraxdu waa muraayado ku habboon cabbirka wejiga dumarka. Jirka muraayadda tortoiseshell wuxuu isticmaalaa habka wareejinta kulaylka si uu si fiican isugu daro qaabka iyo dusha sare. Ka dhig muuqaalka mid aad u gaar ah. Shirkadeena waxay muhiimad weyn siisaa rinjiga buufinta iyo habka wareejinta kulaylka ee alaabta si looga hortago in qaabka tortoisell uusan u qalmin.
Muraayadaha casriga ah ee haweenka ayaa ku habboon goob kasta, oo ku habboon baabuur-wadidda, wax iibsiga, ciyaaraha, iwm Nidaamka wax soo saarka ee la beddeli karo ayaa macaamiisha siiya fursado badan.
Muraayadaha indhaha ee indhaha ayaa ku habboon gabdhaha leh dhammaan qaababka wejiga. Muuqashada qaabka isha bisadu waxay si xariifnimo leh uga saari kartaa meelaha qaarkood ee aan muuqaal ahaan qurxoonayn, waxayna samayn kartaa wax ka beddel labaad marka lagu daro qurxinta.
1.Ma sugi karaa summadayda?
Dabcan, waxaan ku dhejin karnaa astaantaada ama astaantaada gacmaha muraayadaha indhaha.
2.Marka hore ma iibsan karaa 1 lammaane oo muunad ahaan ah oo ma dalban karaa codsi yar?
Haa, waan aqbalnaa dalabka muunada, waxaad dalban kartaa muunad si aad tayada u hubiso marka hore.
3.Intee in le'eg ayaa lammaane kasta?
Qiimuhu wuxuu ku xiran yahay nooca, midabka lenses-ka iyo tirada, markaa waxaan rajeynayaa inaad marka hore liis gareyn karto waxaad doorato.
4Intee in le'eg ayaa la samayn karaa muunad?
Qiyaastii 3 maalmood haddii alaabtu kayd tahay.
5.Tani waa markii ugu horeysay ee aan ka iibsado shirkaddaada, sida loo habeeyo dhoofinta?
Waxaan badiyaa soo rarnaa FedEx, DHL, UPS ama TNT. Haddii aad leedahay xisaab side, sidoo kale waa OK.
Hore: Sawirka weyn ee la buunbuuniyey muraayadaha moodada 183F
Xiga: Ilmaha Bisadda ee Dumarka Dib-u-Celinta Muraayadaha Qorraxda Jumlada
Ookiyaalaha xafladda bisadaha balanbaalis bir ah
Qaabka qoorta presbyopia muraayadaha dumarka
Dumarka Birta Fashion Design Muraayadaha muraayadaha 5138
Tayada Sare ee CE Carruurta muraayadaha ka hortagga manka
Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya,